50 Goobaha Si Qaldan Loogu Talo Galay | Abuurista khadka tooska ah
Waxaan u maleynayaa inay tahay markii ugu horeysay ee aan kugu soo koobo naqshadaha qaldan, laakiin waa inaad caqli leedahay inaad garato in munaasabado badan oo badan ee aad baraneyso ay tahay adigoo u kuur galaya qaladaadka kuwa kale iyo kuwaaga.
Waxaan kaaga tagayaa ka dib boodka oo aan ka yarayn konton naqshadood oo qurux badan oo xun oo loo qaaday webka, nasiib daro indhaha dadka soo galay boggagaas.
Waxyi… laakiin si looga fogaado in qalad lagu helo.
Xigasho | AcidCow
Waxaan ka helnay inay safarro badan gasho, laakiin iyadu ma aysan beddelin degelkeeda tan iyo 1992.
Tani waxay umuuqataa astaan ​​fool xun oo ka socota Windows 95.
Inbadan oo lamid ah Kanagii Hore. Nice clip-art, habka.
ARNGREN: Wejiga ayey kaa feedhayaan.
Fadlan jooji indhahayga.
Saddex erey: Flying Afghan Hound.
Immisa siyaabood ayaad u higgaadin kartaa "waalli?"
Wuxuu leeyahay qaab.
Weli ma hubno waxa uu ahaa hadafkoodu.
Buuqu waa sax.
Daar flash, midkani ha kuu wanaajiyo.
Marnaba ma ogaan karno haddii boggan weligiis u shaqeynayay si sax ah.
Doolfinnada Mouse-over-ka waa kuwo aad u weyn halka uu ku nool yahay ninkani.
Fool xun ayaa leh qaab cusub.
Haddii ay dhab ahaantii helaan ganacsi kasta, waxay u badan tahay inay dib u soo celin ka tahay 1994.
Suuxdin ayaa kugu sugeysa halkan.
Akhris ka dhib badan wargeys yar.
Qoolley Qaanso roobaad. Ma u baahanahay wax intaa ka badan?
Waxay maqleen jaangooyooyinka "ku jira."
Oh Franz, adigu waxaad sameysaa Internetz, adigu.
Dadkani dhab ahaantii waxay u maleynayaan inay yihiin naqshadeeyayaal-qaabeed.
Ninkani runtii wuxuu dadka ka helaa inay isaga ugu codeeyaan jagooyinka awoodda.
Haddii dugsigaaga post-grad uu leeyahay bog sidan oo kale ah, waad fashilantay.
Evolution - ee websaydhka foosha xun.
Fikradooda: "Aynu ku ciyaareyno xayeysiis ganacsi oo dhan (xun) asalka."
Wuxuu isku dayayay inuu u fududaado, laakiin wuu ku guuldareystay.
Boggan waa lil bit crappy.
Ling waxay u badan tahay inay tahay haweeneyda ugu iibsiga badan baabuurta halkaas, laakiin boggeeda ayaa xanuun leh.
Ninkani wuxuu si aad ah ugu faanaa naftiisa isagoo ka dhigaya bartiisa "web 2.0" daahfurnaan.
Macaamiishoodu way ka codsadeen iyaga, laakiin way diidaan inay ka dhigaan goobtooda wax yar oo dhan u dhimista.
Sanadkii 1996, tan waxaa loo qaadan lahaa mid xun.
Tani maahan sida aad u soo jiito macaamiisha mustaqbalka.
Dhulku ma doonayo matalaadda noocan ah.
Werewolves way ka qurux badan yihiin boggan.
Utah, halkaas oo aysan jirin web-naqshadeeyayaal.
Haddii aad raadineyso xero, ka raadi meel kale.
Xagee ka bilaabnaa
Ted waa kubbadda ugu weyn ee waalan adduunka.
Haddii nolosha ka sarraysa dunida ay aragto boggan, weligood wax xiriir ah lama soo sameyn lahaayeen.
Ereyadu ma sharxi karaan boggan.
Weerar ka mid ah gifs-soo-qaadista suuxdinta.
Ninkani wuxuu kaa dhigi doonaa bogga ugu fiican - WELIGE.
Yvette's waa mid iska cad inuu yahay kan ugu quruxda badan ee aroosyada ee magaalada Panama.
Tani dhab ahaantii way jebin kartaa maskaxdaada.
Zimbabwe - halkaasoo ay ka jirto xanta waallida ah ee ku saabsan waxaas oo loo yaqaan "Internetka".
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » 50 Goobaha Si Qaldan Loogu Talo Galay
Waa meelo aad u xun oo daacad laga ahaado, tani waxay ku imaaneysaa mid waxtar leh si loo arko waxa ay tahay inaadan waligaa sameyn.
Ku jawaab TCTB
Wanaagsan, waxaan horey u ogaanay waxa aan sameyn lahayn!
Salaan iyo mahadsanid :)
Kaliya maahan inay yihiin goobo si liidata loo qaabeeyey ... waa kuwo fool xun oo aan lahayn wax heerar ah ... intaas waxaa sii dheer in badankood ay yihiin daaqadaha adduunka ee loogu talagalay ganacsiyada waalan, dulqaadka leh iyo shakiga laga qabo .... Isugeyn wanaagsan !!
Ku jawaab jogreher
Nimcada Qoolleyda dijo
Naqshadeynta 'Waan ogahay kaliya inaanan waxba ogeyn', laakiin tani runtii waa mid aad u fool xun.
Waxay u adeegtaa barashada waxa ay tahay inaanaan sameyn. Salaan!
Ku jawaab Graciela de Palomas
Meelahaas qaarkood waa xun yihiin, qalloocan yihiin oo xun yihiin, xitaa waxay madaxaaga ku dhaawacayaan midabadaas.
Cudurdaarka kaliya ayaa ah in hubaal qaar badan oo ka mid ah goobahaasi ay ka yimaadeen 90-maadkii,
Jawaab Luis Lopez
ilaha naqshadeynta dijo
xaaladaha qaarkood ishaydu way xanuuntaa markaan arko, amar majiro, shax majiro, waa inay noqdaan naqshadaha ugu xun ee shabakada ... salaan uruurin wanaagsan
Ka jawaab jawaabaha naqshadeynta
Qaarkood way ka xun yihiin bogga uu sameeyay Homer Simpson, gebi ahaanba aan la soo bandhigi karin ... midka ku yaal "WebKing" ma aaminsani, boggaas waxaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay 1996, waa wax aan macquul aheyn in wax sidan oo kale ah ay jiraan 2010. ..: S
Mudane Diego dijo
hahaha waxay soo celinaysaa xusuus, talaabooyinkaygii uguhoreeyay ee html waxay aad ugula mid ahaayeen kuwan ...
Ku jawaab Don Diego
Sep websaydhadaas aad u foolxun .. naxdin .. hehehe
EPA! TAN WAA INPIRATORY ... Wixii ugu xumaa ee aan halkan ku soo arkay! .. jhehehe Hal-abuurayaal aad u fiican, bidixdayda inaan wax ka faalloodo ugu dambayntii .. hahaha guul dhammaan. Waxaan u maleynayaa in yar soo daahay laakiin haye waxaan raadinayaa wax.